Zvikoro Zvovhurwa Hurumende Ichikakavadzana neVamwe Varairidzi
Kurume 14, 2021
Zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa nemusi weMuvhuro asi paine ropa rakaipa pakati pehurumende nemamwe masangano evarairidzi nekuda kwenyaya yemihoro nezvematanho ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rePTUZ Doctor Takavafira Zhou vati hakuna murairidzi anoenda kuchikoro sezvo varairidzi vari kutsenga mhandire nemavende.
Mashoko aya atsinhirwa nemutungamiri werimwe sangano revarairidzi reARTUZ VaObert Masaraure vati zvesimuka tienzana zviri kuitwa nehurumende hazvishande.
Masangano aya atiwo hurumende haina kugadzirira zvakakwana kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Mutauriri wesangano rinomirira vashandi vakawanda vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yaimbozivikananwa nekuti Apex Council VaGoibson Mushangu vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi nekudaro zviri kwaari kuona kuti oita sei mangwana.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZIMTA VaRichard Gundani vati vachazogara dare nemusi weMuvhuro voona danho rekutora.
Mutauriri webazi rezvedzidzo VaTaungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kuita gadziriro yakasimba yekuona kuti chirwere cheCovid-19 hachipararire muzvikoro pachitevedzerwa kurudziro dzakabva kusangano reWorld Health Organization. VaNdoro vati zvikoro hazvifanire kuita madiro Ajojina nekuwedzera mari dzechikoro.
Mutevedzeri wegurukota rezvehutano Dr John Mangwiro vakaudzawo dare reparamende kuti varairidzi vachabayiwawo nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 munguva pfupi inotevera. Panyaya yemihoro yevashandi, VaNdoro vati mukombe uyu udarike nekuti zviri kubazi rezvevashandi.
Gurukota rezvevashandi Muzvinafundo Paul Mavima vati nhaurirano dzichiri kuenderera mberi nekudaro hapana chikonzero chekubatirana makano.
Nyaya yekuramwa mabasa kwevarairidzi igangaidzwa kumukwenyi mhezi yavavira mudumbu kuhurumende iri kunzi nenyanzvi munyaya dzezvedzidzo iri kudzikisira dzidzo yemunyika uye kupa kuti vana vakawanda vakundikane mubvunzo.